Car Price Calculator | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions
Used Cars (2153)	Sedan (588)
Car Permit (18)	Old Car Permit (18)
Home » Car Price Calculator
သင့်ကားအား CIF ဈေးနှုန်းအပြင် အခွန်နှင့် ကညနမှတ်ပုံတင်ကြေး အပြီးအစီး မည်မျှ ကျသင့်မည်ကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ အထွေထွေအချက်အလက်များ
Engine Power (CC) e.g 3000
Actual CIF Value (Actual CIF) $
အမှန်တကယ်ကျသင့်သည့် CIF ဈေးနှုန်း
Official CIF Value (Offcial CIF) $
Ministry of Commerce မှ သတ်မှတ်သည့် CIF ဈေးနှုန်း (Search CIF Prices)
Exchange Rate (ကျပ်)
Custom Duty သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
Bus (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် လူ ၁၀ ဦးနှင့် အထက်)
Pick up, Truck, Box Truck, Heavy Truck, Dumper, Track, etc: Motor Vehicles for the Transport of goods
Crane Lorries, Mobile drilling derricks, Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose Motor vehicles) Bulldozers, Excavator, Wheel, Loader, Motor Graders, Road Roller etc; (Heavy vehicles)
ကညန ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head)
Bus (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၅ဦးနှင့် အထက်)
“ပ” အက္ခရာအထိ အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ
“ဗ” အက္ခရာမှ အနှစ်၂၀ကျော် အပ်နှံရန်ကျန်ယာဉ်များ
စီမံချက်တွင်မပါသော အက္ခရာ Taxi ယာဉ်အဖြစ် အသုံးပြုရန်
Company များမှ တင်သွင်းယာဉ်များ (အငှားယာဉ်)
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက အကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ်)
အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက အကျိုးတူတင်သွင်းယာဉ် (အငှားယာဉ် မဟုတ်)
လေလံမှတ်ပုံတင်ယာဉ် အပ်နှံ၍ အစားထိုးတင်သွင်းယာဉ်
Custom ခွန် ($) Custom ခွန် = (CIF x Custom Duty Rate %) + (CIF x Custom Duty Rate %) x Commercial Tax Rate %
ကညန ခွန် ($) ကညန ခွန် = (CIF x 83.33% (သင်္ဘောတင်ခ လျှော့ပေးခြင်း) x မှတ်ပုံတင်ကြေး %) - လျှော့ပေါ့ကောက်ခံခြင်း %
ကုန်ကျစရိတ် ($) = Actual Car Value (CIF in $) + Custom ခွန် + ကညန မှတ်ပုံတင်ကြေး
အထက်ဖေါ်ပြပါ Calculator မှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် လက်ရှိ ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေငြာချက်များ၏ Formula များ အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း၊ အခြားအခြားသော Miscellaneous ကုန်ကျစရိတ်များကို ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။
သတ်မှတ်ထားသော CIF Price များနှင့် ပါတ်သက်ကာ သိလိုပါက၊ အောက်ပါ Link များကြည့်ပါရန်။
2007 မှ 2012 အထိ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် မော်တော်ယာဉ် CIF ဈေးနှုန်းများ
51 Responses to “Car Price Calculator”
Kiran Kumar on February 26, 2012 @ 12:58 am CIF licence value price and actual buying value price can not be same then how can this program be correct?
Reply Kiran Kumar on February 26, 2012 @ 12:58 am CIF licence value price and actual buying value price can not be same then how can this program be correct?
Reply MyanmarCarsDB on March 8, 2012 @ 11:53 am ပုံသေတော့ အကုန်တွက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ အစိုးရသတ်မှတ်ဈေးနဲ့ တစ်ခါတွက် – ကိုယ်တိုင်ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့ နောက်တစ်ခါတွက်ရင် ဈေးခန့်မှန်းနိုင်တာပေါ့။
Reply MyanmarCarsDB on May 24, 2012 @ 5:39 pm We have just fixed the calculator with your feedback. Hoping it shall be helpful.
Reply သနပ်ခါးမေ on November 14, 2012 @ 9:46 am is this calculation include all charges including licence (approximate)?
Reply Van Lian Hup on March 1, 2012 @ 11:11 am thank you very much.
Reply Thein Aung Thein Aung on March 12, 2012 @ 6:32 am ကျေးဖူးပါ
Reply Asta John on March 31, 2012 @ 12:34 am CIF Price နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ link နှစ်ခုက Page not found ဖြစ်နေပါတယ်.
Reply Aye Chan Aung on April 6, 2012 @ 7:57 pm OMG…It's really Shocking! Unbelievable registration fee, tax and custom duty! I just bought new car Nissan Altima 2009 model here in Dubai and I had to pay only registration fee at Only1500 AED (407 US$)….Dear Mrs. Suu Kyi, Please look into this sort of matters if you wish us to come home……
Reply Aung Naing on May 4, 2012 @ 4:07 pmေ၇နဲ.ဓါတ်ဆီ ဘယ်ဟာပိုဈေးကြီးလဲ Dubai မှာ.. What are you doing in dubai? How much does it cost total? ပြန်မလာ၇င်လဲ၇ပါတယ်။
Reply Binya Kyaw Win on August 13, 2012 @ 3:59 am Aye Chan Aung. You can stay in Dubai for your whole life. Its your choice. Reply Steven Gerrad on February 6, 2013 @ 7:09 pm This is called Myanmar, the only one in the world. Because we are rich. Ha ha. Just kidding.
Reply Aung San Thuriya on April 9, 2012 @ 5:51 am နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကားသွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ပြီး ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်ပါမလဲ သိပါရစေ။ ကျေးဇူးပါ…
Reply MyanmarCarsDB on April 27, 2012 @ 5:14 pm အခုကျွန်တော်တို့ ဆိုက်မှာ တင်ထားအရဆိုရင် သိန်း၆၅ ကနေ သိန်း၈၀လောက်ထိပေါက်နေပါတယ်။ ဘယ် CIF အထိသွင်းနိုင်တဲ့ ပါမစ်လဲဆိုတာလည်းမူတည်တာပေါ့။
Reply Aung San Thuriya on April 28, 2012 @ 4:39 am ပြန်ဖြေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ မြန်မာကားဒီဘီကို အားပေးနေပါမယ်။
Reply Myint Naing on April 13, 2012 @ 3:35 pm ကားပါမစ်တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ..ဒါပေမဲ့ ခြောက်ဘီး(၈)တန်ပေါက်တဲ့ ကားသွင်းရင်ဘယ်လောက်ကုန်ပါသလဲခင်ဗျာ..ခုcardb ကနေမြန်မာပြည်အရောက်ကောဘယ်လောက်ယူပါသလဲခင်ဗျာ(အကုန်အပြီးအစီးပေါ့) တချက်လောက်ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ.
Reply MyanmarCarsDB on April 27, 2012 @ 5:13 pm ကို Myint Naing ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့က ကားသွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး။ ကားကြော်ငြာတွေတင်လို့ရတဲ့ MarketPlace ပါ။ ခြောက်ဘီးကားဈေးကတော့ ရောင်းမဲ့သူကကြော်ငြာလာတင်မှပဲ ဈေးကိုအတိအကျသိမှာပါ။ ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Reply Nov Scopion King on May 5, 2012 @ 6:32 am 1997 / 1998 MODEL လောက်ကို ခြောက်ဘီး ကားက အကုန်အပြီး သိန်း ၄၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိပါမယ်..၈ တန် ပေါက် မပေါက်ကတော့ မသေချာပါဘူး..
Reply Aye Chan Aung on May 5, 2012 @ 6:34 am To Aung Naing: Hi there, Thanks for your comment/reply but feel so pathetic for you living in the small world with closed eyes. Note: None of the silly comments/replies will be entertained from silly people those have tiny brain as I'm here to advise/comment for my country to reach to the better position(int'l standards), not to go back to 1999.
Reply Ko Htain on May 8, 2012 @ 3:48 pm ကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်) ဆိုတာ အပီးအစီးလားဗျ။ ကားတန်ဖိုးကောပါလား။ သယ်ယူစရိတ်ကောပါလား။ မသိလို့ပါ။.
Reply Kyaw Zin on June 3, 2012 @ 6:57 am Myanmarcarsdbရေ….အပေါ်ကတွက်နည်းထဲမှာ ကျွန်တော်မရှင်းတာ တစ်ခုရှိတယ်။ Custom Dutyမှာ Commercial Taxပါ ပါသလား? (တကယ်လို့ပါရင် ကျွန်တော်တို့ ဥပမာတစ်ခုတွက်ကြည့်တာ ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာဆောင်ရတာနဲ့ လွဲနေတယ်)
Reply Rocher Cloudy on June 9, 2012 @ 2:21 am Myanmarcarsdb ရေ မရှင်းလို့မေးချင်ပါတယ်။ကညနသက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ CIF ကာဘာကြောင့်ကွာရမှာလဲဗျာ။ကိုယ်ကဒေါ်လာ၅၅၀၀နဲ့တင်ထားတဲ့ကားကိုကညနကသူဈေးနဲ့ပြန်ဖြတ်သေးလားသိချင်ပါတယ်။အဲလိုဆိုရင်ကိုယ်ကဈေးအမှန်နဲ့တင်ထားတာကိုသူတို့ကသူတို့ဈေးနဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီးအခွန်တပ်တာမျိုးလား.
Reply Naung Naung Han on June 9, 2012 @ 5:49 am ဒီတွက်နည်းကမှားနေတယ်။ Custom ခွန် မပါသေးဘူး။ Custom Duty = (AV x 30%), commercial Tax = (AV + Custom duty) x 25% , Total Tax at Custom Office = Custom Duty + Commercial Tax.
Reply Naung Naung Han on June 9, 2012 @ 6:04 am For example CIF 5000$ ==> (1) Custom Duty = 5000$ x 30% = 1500$ , Commercial Tax = (5000$ + 1500$) x 25% = 1650$ , Total Tax at Custom Office = 1500$ + 1650$ = 3150$ (@exchange rate issued by Custom Office), (2) ကညန = (5000$ x 83.33%) x 50% = 2083.25$ (by FEC), TOTAL TAX TO GOVERNMENT = Tax in Custom Office + ကညန ခွန် = 3150$ + 2083.25$ = 5233.25$ for any type of Cars under 1350cc. There may beafine at Custom Office that car is not reconditioned. It is usually 100000Ks.If anything wrong, please modify my calculation. Good Day to all!
Reply Anaw Ya Htar on September 3, 2012 @ 3:57 am Commercial Tax = (5000$ + 1500$) x 25% = 1650$ က ၁၆၅၀ မဟုတ်ပါဘူး ၁၆၂၅ ပါ။
Reply Zar Win on September 23, 2012 @ 4:50 am Thanks you so much.Let me know free permit 1500 cc car ka nya na tax cif price is 6600$. Thanks in adv
Reply Thein Aung Thein Aung on December 7, 2012 @ 3:28 am လေလံ+သင်္ဘောတင်+၀န်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကုန်အုန်းမှာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Reply Oliver Shein on June 18, 2012 @ 7:00 am VALUABLE USEFUL, need to be update.
Reply Myo Myint Han on June 21, 2012 @ 3:26 am (၁) ဒီကားလေး ကို ဓ နံပတ်နင့် replacement လုပ်ချင်ရင်ဘယ်လောက်ကျနိုင်မလဲခင်ဗျ။ (၂) replacement ကားတွေက အများဆုံးဘယ် year ထိ လဲလို့ရလဲ။ (၃) ဒီကားကို သွင်းချင်ရင် CIF က အစိုးရ ဈေးအတုင်းပေးရမှာလား ဥပမာ တကယ်လေလံဈေးက US 19349 ( အစိုးရဈေးက 20060). http://www.japanesecartrade.com/stock/japan-used-toyota-land-cruiser-prado-suv-669846.html
Reply Ko Kyaw on June 25, 2012 @ 4:45 am အခွန်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲ ပြီးတဲ့ ဈေးတွေလား မသိဘူး.
အဆင်ပြေပါက ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှူတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးစေချင်ပါသည်။.
Reply KoKo Denial on June 28, 2012 @ 4:03 am custom ခွန်တွက်တာမှားနေပါတယ် အဲဒါက ကုန်သွယ်ခွန်ပါ custom ခွန်က AV*30% custom ခွန်ရော ကုန်သွယ်ခွန်ပါပေးရပါတယ်.
Reply KatJapan Oto on August 27, 2012 @ 10:23 am http://www.kansaiautotrading.com
Reply MC Wai Yan on September 11, 2012 @ 12:02 pm မေးစရာလေးရှိလို.ပါ……ကားကလေ သင်္ဘောကနေချပြီးလို. နာမည်ပေါက်ရတယ်ထားဦး…..ကားကို ရန်ကုန်မှာ မစီးဘဲ နယ်မှာစီးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေထပ်လုပ်ပေးရမှာလဲ…..ဥပမာ ကားကို ရန်ကုန်မှာမစီးဘူး မော်လမြိုင်မှာ စီးမယ် မြိတ်မှာ စီးမယ် အဲလိုမျိုးတွေကျတော့ ဘယ်လိုတွေ ထပ် ဆောင်ရသေးတာလဲ နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါခင်များ.
Reply Pont Nge Lay on September 11, 2012 @ 12:11 pm nin ka lal pain lite tr:P huuuuu
Reply Twe Tar Soe on September 16, 2012 @ 3:12 pm CIF 8750 နဲ့ 2.0 CC ကားအတွက် ကညန တွက်နည်းလေး ရှင်းလင်းစွာ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပ်ကားက ပ/- ပါ။ 40% လျှော့ထဲမှာ ပါ ပါတယ်။.
Reply Ko Tay on September 23, 2012 @ 2:46 am ကားသွင်းပြီးတက္ကစီလုပ်မလို့ဘယ်ကုမ္မဏီသွင်းသင့်လဲသိချင်ပါတယ်
Reply Phyo Wai Aung on October 26, 2012 @ 7:48 am Mitsubishi challenger ယရီနံပါတ် ရေရာရာငရာရ
Reply Stt Tun on November 3, 2012 @ 11:53 pm Honda Fit 2007 >> actual CIF 3800, Official 5000, beep beep beep 67 lakhs. The importers/car showrooms are doubling the price?
Reply Ronaldo Yusuuf on November 23, 2012 @ 7:15 pm Hummer CIF Reply Pyae Phyo Myat on November 25, 2012 @ 3:09 am ကားကြီး မြေသယ်ကား သွင်းရင် စလစ် လိုလားမသိ။ canter hydraulic3Ton သွင်းချင်လို့ပါ။ အမြန်ဖြေကြားပေးပါနော်.
Reply Phyo Wai Aung on December 25, 2012 @ 10:51 am Mitsubishi chellေenger 97 me၃l lntercooler,Spiller,km 145000,AB
၃င ၇ sale 235 L
Reply May Myat Mon on February 2, 2013 @ 2:47 am pls advice toyota vitz, mazda demio, suzuki swift 2008 total cost including owner book finished
Reply MyanmarCarsDB on February 3, 2013 @ 6:17 am We have changed this calculator in Jan 2013 to reflect the latest policies.
Reply Nobel Set Naing Thu on February 21, 2013 @ 10:10 am Does this count everything? Do I need some kind of other permit?
Reply Lin Lin on February 22, 2013 @ 7:13 pm ကားဝယ်ချင်ပါတယ် လိုက်ထရပ်ပေါ့နော် ၁တန်၁.၅လောက်ပါ ဈေးနူန်းဘယ်လိုကြည့်ရပါ့မလဲခင်ဗျ
Reply Thi Han on March 24, 2013 @ 9:52 am သ ဘောင်္ တင် ခ ပါ ပြီ လား ။
Reply Ye Paing on May 18, 2013 @ 6:09 am 2012model CIF 14000 နင့် 1800cc ကားဆိုရင်အခွန်ဘယ်လိုတွက်ရသလဲ.
Reply Moe Aung Htet on June 10, 2013 @ 5:23 pm We all know car prices in other countries are much cheaper compared to here.. just because you lived in shitty UAE.. dont get urselfastar (*) tatoo on ur butt..in other words "phin gaung ma kyae net"
Reply Moe Aung Htet on June 12, 2013 @ 10:33 am O.o
Reply Moe Aung Htet on June 12, 2013 @ 10:46 am just because you lived abroad mean u r wise ?.. ridiculous! You srsly got star tatoo on ur butt.. Mate, dont ever try to insult people who cant afford to go abroad and say "live in the small word n bla bla bla" Come on man.. what other countries have u been to? dont be too proud coz u lived in UAE… oh btw.. i advised u to stick ur feet with the ground..coz got too much gap.. (out chae loot)
you areakind of person I detest the most!! Reply Trackbacks/Pingbacks
MyanmarCarsDB’s Updates | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများToyota Hilux Double Cab Pick Up 1020kg 4WD TD GX Diesel 2001 (20 views)Toyota Passo (19 views)Isuzu Rodeo DCAB PICKUP 3.0L 2004 (18 views)CHEVROLET MW (18 views)HILUX SURF SSR(G) (15 views)Isuzu Rodeo 3.0TD DENVER DOUBLE CAB 4X4 4dr 2003 (15 views)HONDA, INSIGHT HYBRID 2009, 138 သိန်း (အလျှော့အတင်းမရှိ) (14 views)Fairlady 350Z (14 views)Toyota Hilux TIGER SR5 3.0 DIESEL SPACE CAB 2dr 1998 (13 views)Toyota, Belta အပြာရောင် ပုံပြောင်း, SCP-92, 2009 (သိန်း 151 Ks) (12 views)သင့်လုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပါ	Original Car Manufacturer, Car Showroom Dealer များ၊ ကားအပိုပစ္စည်း၊ ကားနဲ့ပတ်သက်သော အစိတ်အပိုင်းများ ရောင်းဝယ်ပြုပြင်သူများ၊ အခြား စိတ်ပါဝင်စားသူများ သင်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဤဆိုက်တွင် ကြော်ငြာလိုပါက အောက်ပါ အီးမေးလ်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း: +၉၅ - ၀၁ - ၂၉၉ ၃၉၉ ၊ +၉၅ - ၀၉ - ၄၅၂၃၃၅၁၃၉ ၊ +၉၅ - ၀၉ - ၇၃၀၆၇၂၀၆ နောက်ဆုံး သတင်းများ
by Hla Myo on June 14, 2013 -0Comments
ကီလိုလျှော့ထားသည့်ကားများကိုစီစစ်ရန် OSS အဖွဲ့မှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှ...
ကားများအတွက် လုံခြုံမှုဖြစ်စေသော CCTV ကင်...
by Hla Myo on June 13, 2013 -6Comments
ယာဉ်မတော်တဆမှုများအတွက် လုံခြုံမှုရှိစေရန် ကားများတွင် CCTVကင်မရာ (Dash Camera) များတပ်ဆင်မှု များပြားလာကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘန်ကောက်၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန...
အရစ်ကျစနစ်ဝယ်ယူခြင်းသည် ဝယ်သူအတွက် အခက်အ...
by Hla Myo on June 12, 2013 -0Comments
နောက်ဆုံး သတင်းများ	တစ်ပါတ်အတွင်း ကားလောကသတင်း
ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများToyota Hilux Double Cab Pick Up 1020kg 4WD TD GX Diesel 2001 (20 views)Toyota Passo (19 views)Isuzu Rodeo DCAB PICKUP 3.0L 2004 (18 views)CHEVROLET MW (18 views)HILUX SURF SSR(G) (15 views)Isuzu Rodeo 3.0TD DENVER DOUBLE CAB 4X4 4dr 2003 (15 views)HONDA, INSIGHT HYBRID 2009, 138 သိန်း (အလျှော့အတင်းမရှိ) (14 views)Fairlady 350Z (14 views)Toyota Hilux TIGER SR5 3.0 DIESEL SPACE CAB 2dr 1998 (13 views)Toyota, Belta အပြာရောင် ပုံပြောင်း, SCP-92, 2009 (သိန်း 151 Ks) (12 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions. All Rights Reserved.